अध्ययन आफ्नै देशमा गर्नुपर्छ, विदेशमा त घुम्न जाने हो : अर्चना पण्डित — Motivate News
Posted on November 21, 2016 by motivate news
काठमाडौँ – सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हाल्दा पूर्व मन्त्री लालवाबु पण्डितलाई धेरैले लोभ लालज देखाए । कसैले गाडी किनीदिने प्रस्ताव ल्याए त कसैले घर बनाइदिने । यता पैसा हुने त करोडौँ पैसाको लोभ देखाए उता शक्ति हुनेले शक्तिको आश देखाए । कोही कोहीले भनेको नमाने ज्यान मार्नेसम्मको धम्की दिए । तर पूर्व सामाज्य प्रशासन मन्त्री पण्डित विचलित भएनन । आफ्नो काममा अडिक रहिरहे । उनी एउटा काममा अडिक रहेर देशको लागि काम गरि रहँदा घरमा भने परिवारको गुनासो सुन्ने फुर्सद हुँदैन् । दुई कोठा र एउटा किचनमा गुजारा चलाई रहेका पण्डित परिवारका पनि केहि इच्छा आकांक्षाहरू हुदाहुन । अन्य पूर्व मन्त्रीहरु गाडीमा गुडिरहेका वेला, उनीहरुलाई पनि गाडीमा गुड्न रहर लाग्दो हो । अरू पूर्व मन्त्रिहरू आलिसान बंगलामा रमाइरहेका बेला उनीहरूलाई पनि आफ्नै घर भैदिए हुन्थ्यो जस्तो पनि लाग्दो, मिठो खान र राम्रो लाउन मन पनि लाग्दो हो पण्डितका छोरा छोरीहरुलाई । के छ लालवाबु पण्डितको घरको अवस्था ? परिवारका सदस्यलाई कस्तो लाग्छ पण्डितको व्यवहार ? लगायतका विषयमा लालवाबु पण्डितकी छोरी अर्चना पण्डितसंग मोटिभेट न्यूजका प्रबन्ध निर्देशक शान्त शर्माले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ सोहि कुराकानीको सम्पादित अंश ।
अहिले एस एल सी पास गरेर एघार कक्षामा अध्ययन गर्दैछु ।
बुबा मन्त्री भएको बेलामा स्कुलमा के भन्थे ?
तिम्रो बुबाले जुन डिभी पिआर÷धारीलाई कारबाही गर्ने कानुन बनाउँदै हुनुहुन्छ । यो साँच्चिकै देशको हितमा छ भनेर मेरो साथीभाइ र शिक्षकहरुले मलाई धन्यवाद दिनुहुन्थ्यो । एक देशको सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने अनि अरु देशको डिभी पिआर लिनेलाई देशको माया हुँदैन भन्थे ।
यसमा तपाईलाई व्यक्तिगत रुपमा कस्तो लाग्छ ?
यो राम्रो काम हो ।
तपाई पढ्न अमेरिका युरोप जानुहुन्न ?
म नेपालमा नै अध्ययन गर्छु । नेपालको शिक्षा विदेशको भन्दा कम छैन । विदेश त घुम्नको लागिमात्र जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।
तपाइलाई कुन विषय अध्ययन गर्न रुचि छ ?
अहिले एमविविएसको लागि बायो लिएर ११ मा पढ्दैछु ।
अरु भूपू मन्त्रीको छोराछोरी निजी गाडीमा चडेर स्कुल कलेज जान्छन् तपाईलाई यस्तो रहर लाग्दैन ?
अहँ, मलाई त्यस्तो केही रहर छैन । म पनि बुबा जस्तै सादा जीवन उच्च विचारको मान्यतामा विश्वास गर्छु ।
Posted in अन्तर्वार्ता, मुख्य समाचार | Tagged lalbabu pandit, लालबाबु पण्डित | Leaveareply
भ्रष्टचारी,घुसखोरी निर्मुल पार्न म राजनीतिमा आएको हुँ : सागर श्रेष्ठ
काठमाडौ – सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा जन्म भई काठमाडौंलाई कर्मथलो बनाई रहनु भएको, विगत लामो समयदेखी समाजसेवामा क्रियाशिल, स्पष्ट वक्ता, बहुआयमिक, मिडियाकर्मी, जुझारु युवा, विभिन्न संघ संगठनहरुको स्थापना तथा सामाजिक संघ संगठनहरुको प्रमुख पदहरुमा रहेर काम गरिसक्नु भएका सागर श्रेष्ठ दर्जनौ संघ संंगठनहरुमा कुशल नेतृत्व...